प्रभु बैंक र नेपाल बैंकको खराब कर्जा डरलाग्दोः नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर ? - Aathikbazarnews.com प्रभु बैंक र नेपाल बैंकको खराब कर्जा डरलाग्दोः नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर ? -
नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । ती मध्ये प्रभु बैंक लिमिटेड र नेपाल सरकारकै लगानी रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडमा सबै भन्दा बढि खराब कर्जा छ भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।
प्रभु समूहको ठूलो लगानी रहेको प्रभु बैंक लिमिटेडले मर्जरको बेला लिएर आएका सयौं कर्जा अझै उठेका छैनन् । ग्राण्ड बैंक लिमिटेड र किष्ट बैंक लिमिटेडबाट आएका ठूला कर्जा नउठेपछि भित्रीरुपमा प्रभु बैंकमा धमिरा लागेको फेला परेको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने प्रभु बैंकको पछिल्लो वित्तिय विवरणमा उल्लेख भए अनुसार बैंकको खराब कर्जा करिब करिब ४ प्रतिशत भेटिएको छ । यो बैंकिङ्ग प्रणालीको डरलाग्दो औजेरी हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्को नेपाल सरकारकै लगानीमा स्थापना भएको पूरानो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको पनि खराब कर्जा करिब करिब ४ प्रतिशत नै भेटिएको छ । नेपाल बैंकमा पछिल्लो समय खराब कर्जा घटाउन नसकेको आरोप अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी र सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारी माथी लाग्दै आएको छ ।
अर्बैको सम्पत्ती देखेर प्रभु बैंकले विग्रेको बैंक किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंक भित्र्याएपछि प्रभु बैंकले शाखा सञ्जालमा प्रगति गरे पनि कर्जा उठाउन अझै सकेको छैन । भनिन्छ यी दुई बैंकबाट आएका करिब ५ अर्ब भन्दा बढि कर्जा अझै उठेका छैनन् ।
धितोको मुल्याङ्कन बढेको छ । तर, कर्जा नै प्रमिजन भएपछि लगानीकर्ताले लामो समय देखि प्रभु बैंकबाट ठूलो प्रतिफल अझै पाउन सकेका छैनन् । यो अर्को चुनौती पनि हो ।
भनिन्छ राजनीतिक दबाबमा गएका सयौं कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएका छन् । नेपाल बैंकमा भन्दा फरक पर्दैन । करिब ४ अर्ब भन्दा बढिका खराब कर्जा बैंकले प्रोभिजन गरेपनि उठाउन अझै पहल नगरेको भेटिएको छ । सीइओ अधिकारीको नेतृत्व टिमले खराब कर्जा उटाउन पहल गरेपछि सफल नभएको देखिन्छ । यो करिब ४ प्रतिशत खराब कर्जाले बैंकका लगानीकर्तालाई दिइने प्रतिफल घट्ने मात्रै देखिदैन करिब ४ प्रतिशत खराब कर्जा भएको बैंकलाई राम्रो पनि मानिदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई समयमै खराब कर्जा उठाउन निर्देशन नदिए चुप लागेर बसे यी दुई बैंकमा जनताको डिपोजिट डुब्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चाहि यी दुई बैंकलाई यति ठूलो खराब कर्जा देखिए पछि हस्तक्षेप गरि सुर्धान सक्ने अधिकार छ । तर, बोल्दैन कारण हो राजनीतिक हस्तक्षेप र एउटै पार्टी भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकमा हामी जस्ता निरिह जनताको डिपोजिट र शेयर छ हाम्रो डिपोजिटमा महंगो तलब भत्ता देखि १ करोड भन्दा माथीको गाडी चढ्ने प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन र नेपाल बैंकका सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारीले जनताको पैसाबाट दिइएको कर्जा उठाउनु पर्दछ कि पर्दैन । यसको उत्तर कसले दिने हो ?
नेपाल राष्ट्र बैैंकले यी प्रभु बैंक र नेपाल बैंकको वित्तिय विवरणलाई स्वीकृत दिँदा खराब कर्जा हेर्नुपर्दछ की पर्दैन । यो चाहि अब खोजीकै विषय बनेको छ । जनताको डिपोजिटबाट घरको चुलो बाल्ने । तर, जनतालाई चाहि लाभाशंं दिँदा मुठ्ठी कस्ने बैंक नेतृत्व र बैंक सञ्चालक समितिले प्रभु र नेपाल बैंकको डरलाग्दो खराब कर्जा उठाउन तत्कालै पहल गर्नुपर्दछ कि पर्दैन हेक्का होस् ।
बैंक र वित्तिय संस्था पब्लिक कम्पनी हुन् । त्यस भित्र आएका बदमासीहरु पाठक सामु लैजाने दायित्व हामी पत्रकारहरुकै हो । जनताको पैसा डुब्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यी दुई बैंकको वित्तिय विवरण भित्र के छ त हेरौं ।
नेपाल बैंकको खराब कर्जा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल बैंक लिमिटेडले ५५ करोड ४ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले ५८ करोड १८ लाख खुद नाफा कमाएकोमा यस वर्ष बैंकको खुद नाफा ५.४० प्रतिशतले घटेको भेटिएको छ ।
यस अवधिमा बैंकको संचालन मुनाफा भने २७.६० प्रतिशतले बढेर ७७ करोड ८९ लाख पुगेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.५४ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । पहिलो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा १९ करोड ६४ लाख रहेको छ । त्यस्तै बैंकको निक्षेप २.३६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह १ खर्ब ७ अर्ब रहेको देखिन्छ ।
यस अवधिमा बैंकको प्रति शेयर आम्दानी १९.५१ रुपैयाँ, प्रति शेयर नेट वर्थ २७३.४९ रुपैयाँ, खराब कर्जा ३.०२ प्रतिशत, बेस रेट ६.८१ प्रतिशत, कोषको लागत ३,९७ प्रतिशत, सिसिडि ६६.५४ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात १७.०३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंकको खराब कर्जा २.७५ प्रतिशत थियो ।
करिब १ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा बढेको छ । यो राम्रो पक्ष होइन ।
प्रभु बैंकको खराब कर्जा बढ्यो ?
केही समय यता प्रभु बैंकको यस त्रैमासमा भने खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा २.५१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अहिले भने यस त्रैमासमा आउँदासम्म बृद्धि भएर ३.३२ प्रतिशत पुगेको छ । यो वाणिज्य बैंकको इतिहासमै डरलाग्दो अवस्था हो । ५ प्रतिशत भन्दा बढि खराब कर्जा भए राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक हस्तक्षेप गर्न सक्दछ र बैंक सुधार गरि जिम्मा लगाउन पनि सक्दछ हेक्का होस् ।
स्प्रेडदर घट्नु पर्नेमा बढ्यो !
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७७ साल असार महिनासम्म ४.४० प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नु भने पनि प्रभु बैंकको स्प्रेडदर भने बढ्लै ५ .१५ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाटै प्रस्ट देखिन्छ । प्रभु बैंक कसरी चलेको छ भनेर । यो अर्को डरलाग्दो पक्ष हो ।
प्रभु ग्रुप राम्रो संस्था भएपनि बैंक व्यवस्थापन टिमको बदमासी र असक्षमताले बैंक ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी भर्ना देखि कर्जा प्रवाहसम्म बैंक भित्र भएका बदमासीले प्रभु बैंक प्रभूको इच्छाबाट चलेको संकेत देखा पर्न थालेको देखिन्छ ।
प्रतिशेयर आम्दानीमा गिरावट
चुत्ता पुँजीमा १६ प्रतिशत बृद्धि भएको र खुद मुनाफामा ५ प्रतिशतको बुद्धि भएको कारणले गर्दा कम्पनकिो प्रति शेयर आम्दानीमा ९ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ । कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी २४ रुपैया ३७ पैसा रहेको देखिन्छ । प्रभु ग्रुप राम्रो संस्था भएपनि बैंक व्यवस्थापन टिमको बदमासी र असक्षमताले बैंक ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी भर्ना देखि कर्जा प्रवाहसम्म बैंक भित्र भएका बदमासीले प्रभु बैंक प्रभूको इच्छाबाट चलेको संकेत देखा पर्न थालेको देखिन्छ ।
कोरोना कहरको नाममा खराब कर्जा उठाउन पहल नगर्नु भनेको असक्षमता मात्रै होइन । जनताको डिपोजिट डुवाउने अर्को खेल हो भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
दाङ्ग र सल्यानमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका शाखा विस्तार
माछापुच्छ्रे क्यापिटलद्वारा महिलासँग अन्तरक्रिया
कोरोना भाईरसले बीमाको महत्व बढेको छ, यो विशम अवस्थामा कसैले पनि ठूलो आर्थिक अपेक्षा नराखौं
एनआईसी एशियाकाे नाफा अरब माथि
एशियन लाईफको नविकरण बीमा शुल्कमा ब्याज छुट
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा सोनाम तामाङ सम्मानित